Valentine Day လက်ဆောင် ဟင်းလျာ | Wutyee Food House
« အုန်းနို့ ငါးအကြွပ်ကြော်
အာလူးပူတင်း (ချစ်သူအတွက် ဟင်းလက်ရာ) »
February 3, 2012 by chowutyee
Valentine Day ရောက်တော့မှာ ဟုတ်လို့ ချစ်သူအတွက် ဆိုတဲ့ ဟင်းလျာကို အထူးရည်ရွယ်ပြီး တင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Valentine Day မှာ ချစ်သူကို ဘာလက်ဆောင် ပေးရမလဲ စဉ်းစားလို့ ခေါင်းရှုပ်နေကြပါသလား။ ချစ်သူအတွက် အထူးလက်ဆောာင် အနေနဲ့ ဒီဟင်းလျာလေးကို ချက်ကျွေးလိုက်ကြပါ။
၂။ Mustard – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း (CityMart ဆိုင်တွင် ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်)
၃။ Barbecue ဆော့ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၇။ ဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
၁။ အမဲသားကို အရှည် ၂လက်မအရွယ် ပါးပါးလှီးပေးပါ။
၂။ ပြီးလျှင် အမဲသားကို (mustard၊ barbecue ဆော့၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ ကြက်သားမှုန့်၊ ဆား၊ ဆီ) တို့ဖြင့် ရောနုယ်လိုက်ပါ။
၃။ မိနစ် ၃၀ခန့် ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်၍ နုပ်ထားပေးပါ။
၄။ မချက်ခင် ၅မိနစ်ခန့် ကြိုထုတ်ထားပါ၊ ပြီးလျှင် ဒယ်(Non-stick fry pan) ထဲ အမဲသားပြားများကို ၃သုတ်ခွဲထည့် မီးနည်းနည်းဖြင့် အညှိရောင်သန်းလာသည်အထိ ကင်ပေးပါ။
၅။ ပြီးလျှင် ကင်ထားသော အမဲသားများကို Oven (၂၀၀ ဒီဂရီ) ဖြင့် ၁၅မိနစ်ခန့် ထပ်ကင်ပေးပါ။
၆။ Oven ဖြင့် ကင်နေစဉ် broccoli ကိုအတုံးလေးများတုံးပြီး ရေနွေးဖြင့် ၅မိနစ်ခန့် ပြုတ်ပေးပါ။ ပြီးလျှင် ဇကာဖြင့် ပြန်ဆယ်ပြီး ရေအေးပြန်စိမ်ပါ။ ပြီးလျှင် broccoli ကို သကြား၊ ဆား (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ပုံ၁ပုံ) ထည့်ရောမွှေပေးပါ။
၇။ ထို့နောက် ပန်းကန်ပြားတစ်ခုပေါ်တွင် broccoli နှင့် strawberry များကို ပုံတွင်ပါသည့်အတိုင်း အသဲပုံဖော်စီလိုက်ပါ။
၈။ ပြီးနောက် Oven ဖြင့်ကင်ထားသော အမဲသားများကို အသဲပုံဖော်ထားသော ပန်းကန်ထဲ စီထည့်လိုက်ပါ။
၉။ သင့်ချစ်သူအတွက် Valentine Day အထူးလက်ဆောင် ဟင်းလျာကို ရရှိပါပြီး။
Posted in အနောက်တိုင်း ချက်ြ့ပုတ်နည်း | 12 Comments
on February 12, 2010 at 2:53 pm | Reply Hmone Gyi
wow wow wo so romatic heee 😉 like lote own ma LOL
on February 12, 2010 at 2:58 pm | Reply chowutyee
hee.. You should try on Valentine Day!..It is really good taste… 🙂
on February 12, 2010 at 2:56 pm | Reply Trader Begger
i am only interested in grilled beef..
on February 12, 2010 at 3:00 pm | Reply chowutyee
heeeee.. Ko Gyi also cook at Valentine Day.. anyway grilled beef is really good taste!!!
on February 12, 2010 at 3:02 pm | Reply Ma Ei
အသဲပုံလေးနဲ့မိုက်တယ်ဟေ့…ညီမလေး ရေ။
မမ ရဲ့hubby ကို ချက်ကျွေးလိုက်ဦးမယ်…း)
on February 12, 2010 at 3:11 pm | Reply chowutyee
Thanks Ma Ma Ei:)
on February 17, 2010 at 3:35 am | Reply Ma Yee Mon
Wow! It looks delicious! Thanks for your post Yee.
on February 17, 2010 at 3:49 am | Reply chowutyee
Hee!! Thanks Ma Yee mon.. It is really good taste, don’t forget to try it…. 😉
on July 3, 2011 at 4:44 pm | Reply zaw
အဲဒါမျိုးလေးတွေကို တစ်နေ့တစ်နက်စီပဲ စားချင်ပါတယ်နော်
on February 5, 2012 at 1:57 pm | Reply ခင်ယမုံ
[…] February 3, 2012 Valentine Day လက်ဆောင် ဟင်းလျာ […]